Rehefa mamely amin'ny toerana ambany indrindra amin'ny asa kanto ny aingam-panahy | Famoronana an-tserasera
El Sarotra be ny lalan'ny zavakanto ary tsy vitsy ny mpanakanto mila mandalo cesspool mba hivoahana amin'ny angovo lehibe kokoa. Vitsy ny sekoly mampitandrina an'io ary maro no mahita ny zava-misy henjana rehefa nahavita ny fianarany 3 taona izy ireo hahatsapa fa miankina amin'ny tenany ny hanohizany.
Peng Ven Wong dia mpanakanto iray izay voatery nanao izany mahatsapa izany amin'ny nofony mba hahatsapa fa tamin'ireny fotoana maizina ireny dia afaka namorona tantara an-tsary 36 momba ny goba gilasy izy izay manana laza be eo amin'ny tamba-jotra.
Ilay iray ihany no nilaza fa ny artista rehetra dia maniry ny hahavita hamorona zavatra miaraka aminy mianjera amin'ny tongotrao ny olona indraindray. Izany dia tamin'ny fotoana very indrindra na farany ambany indrindra indrindra nananany, rehefa tonga tao aminy ny aingam-panahy ho an'i CubeMelt, sombin-dranomandry iray izay mitantara tantara maro.
Very tany amin'ny toerana nahitany asa, tamin'ny taona 36 dia tsy tena hainy ny nametraka ny asany. Tao anatin'ireo fotoana nisian'ny fisalasalana misy izany, rehefa tsapany fa nilatsaka ny fiainany toy ny hoe gilasy ao anaty kaopy soda.
Noho izany dia nipoitra ny fisalasalana momba ny zavatra hataon'ny gilasy mandritra ny androm-piainany fohy. Io no fotoana nahaterahan'i CubeMelt. Koba-dranomandry misy fo lehibe izay nety ny zava-drehetra ary niaraka tamin'io fihetsika io izay azo natao ny zava-drehetra.
Miaraka amin'ny filôzôfia fa fohy ny fiainana dia nanomboka tantara an-tsarimihetsika maromaro izy hatramin'ny faha-33 ary manomboka manangona ny sain'ny olona an'arivony erak'izao tontolo izao. Mety ho iray amin'izy ireo ianao Instagram na ny pejinao Facebook hanaraka ny dia mahafinaritra an'ny CubeMelt.
Avelanay ho anao ny fiainan'ny mpamorona amin'ny GIF 13.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mamorona tantara an-tsary malaza amin'ny faran'ny ambany indrindra amin'ny asa famoronana mpanakanto